हेर ! कमिनी कति ठाट्टिएर हिँडेकी
चैत्र ८, २०७६ प्रकाश अधिकारी
सुत्ने बेला भएन ?
आउने हो ?
यो कुनै घनिष्ठ प्रेम प्रेमीकाले मध्यराती गरेको सम्वाद होइन । मध्यदिनमा भर्खर एघार कक्षामा पढ्दै गरेका किशोर किशोरीको प्रेमलाप हो । अहिले समाज अलिक खुल्ला हुदँै छ । हुनुपर्छ । समय बुझनै नसक्ने गरि फेरीएको छ । भेट्नै नसकिने गरि उछिट्टीएको छ । हुन त समय परिवर्तनशिल नै हुन्छ । अकाट्य सत्य हो । र म संग अर्को महासत्य पनि छ । यहाँ मान्छेको स्वभाव मान्छेको जस्तो छैन् । हरेक सम्वन्ध यान्त्रीक बन्ने यात्रामा छन् ।
मेरो निकटको साथी प्रेम हिजो मात्र फेसबुकमा बनेको साथी लिलासंग लुकिलुकी च्याट गदै थियो । सधै सबैकुरा भन्ने साथी आज म संग किन लुकीलुकी मस्की मस्की बोल्दै छ । मलाई खुल्दुली भरिदै गएको थियो । बाइकको साँचो कहाँ छ ? उस्ले सोध्यो । किन ? । मैले प्रति प्रश्न गरेँ । उ निकै हतार देखिन्छ । उ निकै गम्भीर जस्तो पनि लाग्यो । केही नबोली साँचो दिए । उ बाइकमा घुइकियो । उ कता गयो ? किन केही नभनी गयो ? मनमा खुल्दुली भयो । सधै सबै कुरा भन्ने मान्छे आज एक्कासी केही नभनी गयो । गुलाबी ओठ । कामुक गाजलु आँखा र बंैशले उन्मतm भएकी आउने हो ? भनि अफर गर्ने केटी लिला रहेछिन् । प्रेम र लिलाको म्यासेज हेरेेंं। उसले हतारमा फेसबुक साइन आउट गर्न भुलेछ । अलिक कुरा सहज भो । माया प्रेम गर्नु मानिसको लागी अधिकार हो । कुनै अपराध होइन् । अपराध त त्यती बेला हुन्छ । जतिबेला मायाको जाल विछाएर क्षणिक स्वार्थको लागी नाटक रचिन्छ । कतिले नाटक नबुझेर त कतिले गरेर जिवन बर्बादीमा धकेली रहेका छन् ।
“दिलमा त अर्कैलाइ डुलाएको रहेछौबिचरा म सोझिलाई माया गर्छु भनेर भुलाएको रहेछौ । ” केही दिन पछि लिलाले फिलिङ स्याडवाला स्टाटस् फेसवुकको वालमा पोष्ट गरी ।
मलाई निकै रमाइलो परि लाग्यो । र दुख पनि । हैट कलियुगको प्रेम बुझ्नै नसकिने । यो प्रेम हो वा बास्ना ? कतै पढेको थिए, अविवाहितहरू प्रेमको प्रभावले बर्बाद हुन्छन् विवाहितहरू प्रेमको अभावमा । प्रेमलाई समय कटाउने मेसो मान्नेहरु बास्ना ठान्ने हरु बर्बाद त यसै भए । चोखो प्रेम गर्नेहरु हायल कायल भएका छन् । हुन्छन् ।
‘मन कस्तो कस्तो भयोे । सुन्दर फूल मन पराउनेले काडाँको प्रहार सहन जरुरी हुन्छ । तव प्राप्ती हुन्छ गहिरो सागरको मोती ।’ यो लाइनको कमेन्ट गरु गरु लागेको थियो । तर गरिन । सोचँे सेक्स गर्न सजिलो छ तर माया गर्न निकै कठिन । नजाने गाउँको बाटै नसोध्नु टन्टै साफ । फेसबुक साइन आउट गरे । विहानको ८ बजेको समाचार बुलेटिन तयार भयो । न्युज रिडरलाई जिम्मा लगाएँ । बेक्रफास्टको लागि पहिलो पटक मलाई भेट्न आएको साथी उमेश र म नजिकैको कफि सप छिर्यौँ ।
भोली शनिबार । अन्र्तराष्ट्रिय रंगभेद विरुद्धको दिवसको लागि एउटा आलेख लेखिदिनुपर्यो । उमेशले फि गफमा भन्यो । उमेश एउटा राष्ट्रिय पत्रिकारको सम्पादक हो । यो समयकै शक्तीशाली । मेरो अन्नय मित्र पनि । उसको आग्रहलाई मैले अहिले सम्म नकारेको छैन् । हुन त म न कुनै चर्चित लेखक हुँ न कहलीएको विद्धवान । हतारिएको साहित्य र फुर्सदको साहित्यको विधार्थी भएकाले बेला बेलामा समाजले देखाउने असली चित्र र चरित्रबारे कलम र कदम चाल्ने गर्थँे । हुन्छ भने । उमेश लेकसाइड तिर गयो । म अफिस ।
शुक्रबार वित्यो । पत्रिकाले फोन गरेर रिमाइण्ड गरायो । लेख्न खोज्छु केही विषयले छँुदै छुदैन् । ल्यापटको स्त्रीन हेर्दा हेदैैै आखाँबाट रगतको आँशु झर्ला जस्तो भो । मरि गए केही भएन । कस्ले सरुवात गर्यो यो माया भन्ने चिज । मोवाइलको रिगटोन वज्यो । विकासको फोन रहेछ । कवि लेखकहरुको अखडामा हामी भेट भयौँ ।
कफि सपमा पोखराकै चर्चित समाजसेवी पनि भेटिए । साथी कुरिरहेका रहेछन् । उनी आफ्ना साथी आएपछि अर्को टेबलमा गए । चियाको चुस्किीमा चुरोटको धुँवा उढाउदैँ उनिहरुको गफमा वस्त थिए । के लेखौँ कसरी लेखाँै भनेर छट्पटिमा थिएँ ।
मोवाईल करायो । कसैको फोन हुनुपर्छ । हेरँे । मेरो साथी निर्मल जो एउटा पोखरा नाम चलेको रंगकर्मी हो । फोन उसैको थियो । बेलुका दोहोरी साझँ योजना बनाएको रहेछ । मलाई सुनाउदै थियो । म नजाने । उ के के भन्दै थियो । मेरो मोड छौन् पछि कुनै दिन जाँउला भने । म संग रिस्सिएर फोन राख्यो । उस्लाइ भन्न मन थियो । हिड्दै जाउ जिन्दगीले तिमीलाई धेरै कुरा दिएर जान्छ,सिकाएर जान्छ जुन कुरा तिमीले सबै गुमाएर जिन्दगीमा एक्लो भएपछि मात्र महसुस गर्ने छौ..।
केही बेर पछि उ मेरो घर नै आयो । केटा केटा भए पछि पक्कै केटीका गफ सुरु हुनु स्वाभाविक हो । उस्को पाल्पाको पिस्टेल हस्पिटलमा कामगर्ने धरानकी नर्स रोशनीसंग आज दोहोरी जाने सेटिङ्ग सुनायो । को हो रोशनी ? मलै सोधे मेरो फेसबुुकको साथी यार निकै च्वाक छ र सेक्सी पनि । ए ए मैले टाउको हल्लाए । उस्को सुन्दरताको वर्णन गरिरहेको छ ।कमिनी भए पनि च्वाँक छ यार च्वाँक । देख्दै फिदा भइन्छ यार । उस्ले थप्यो कुनै बलिउड फिल्मको नायिका भन्दा कम छैन् यार । उसको यो कुराले मेरो दिल दिमागमा ९ रेक्टर स्केलको भुकम्प गयो ।
म अवाक भए । उसकोे सैन्दर्य चिन्तन देखेर । के कमिनी राम्रो हुनु हुदैन् ? राम्रो पनि बाहुनी जस्तो ठकुरी जस्तो ? अनी नराम्रो बाहुनी चाहीँ को जस्तो ? कमिनी जस्तो ? कि सर्कीनी जस्तो ? सोधौँ जस्तो लागेको थियो । सोधिन् । ....के मा हानेर मुखमा छिटा ।
मनमनै सोचे यो उन्न्त समाज भत्काउने जान्नेहरूले हो र संसारलाई यी जान्नेहरु भनौंंदाले भन्दा बेसी गर्नेहरूले उन्नत बनाएका हुन् । उस्ले भन्यो सेक्सको लागी तयार भएकी छे । त्यसलाई विहे नै गर्ने हो मैले सोधे ‘. हा हा हा लामो हाँसो हाँस्यो र भन्यो । मुला कमिनी कसैले विहे गर्छ ?
शनिवार, चैत्र ८, २०७६, १०:०३:००
कोरोनाको सहर - रोसन तिमिल्सिना
अब गर्मी लाग्यो (बालकविता) - रमेशचन्द्र घिमिरे
शारदा पाैडेलकाे कविता : बिन्ती न लुकाइदेऊ
चैत्र १४, २०७६ प्रकाश अधिकारी
प्रेरक कथा : हामी यस्तो जीवन किन बाँच्न चाहन्छौ ?